Wararka Maanta: Axad, Jan 7 , 2018-Deegaanka Goobweyn oo hoostaga Kismaayo oo laga daahfuray xafiisyo uu ku shaqeeyo maamulka
Deegaanka Goobweyn oo qiyaastii 13 KM dhanka waqooyi kaga beegan Kismaayo ayaa ah goob taariikh fog leh islamarkaana ah halka ay uu webiga Jubba kaga darsamo badweynta Hindiya.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Ibraahim Max’ed Yuusuf (Timajilic) oo munaasbaddii daahfurka ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu qeyb ka yahay mashaariic ay wado wasaaradda arimaha gudaha oo lagu horumarinayo deegaanada hoostaga Kismaayo.
Waxa uu ka codsaday Madaxweyne ku xigeenka 2-aad ee Jubbaland in deegaankaasi loo dhameystiro baahiyaha arimaha bulshada ee ka jira.
Madaxweyne ku xigeenka 2-aad ee Jubbaland Mudane C/qaadir Xaaji Max’uud (Lugadheere) ayaa intaa kadib madasha ka hadlay, isagoo sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland ay ka go’antahay in ay dib usoo celiso dhammaan adeegyadii muhiimka ahaa ee bulshada, isagoo xusay in Goobweyn ay u yimaadeen daahfurka xafiisyada maamulka iyo weliba dhagaxdhigga mashruuc kale oo deegaankaasi looga hirgelin doono nalalka ku shaqeeya cadceedda.
Bulshada ku dhaqan deegaanka Goobweyn ayaa isugu jirta xoolo dhaqato iyo qaar kale oo beeraleey ah.